SULTANBET577 FENERBAHÇE'NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN - RESTBET501.COM GİRİŞ
SULTANBET577 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN
အုပ်ချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများသည်အဝါရောင်နှင့်နက်ပြာရောင်တို့ဖြစ်သည်။ Emre Belözoğluအားကစားဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းသည်ဤပြောင်းလဲမှု၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Emre Belözoğluအားအားကစားဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်တွင်သူ၏နေရာကိုအစားထိုးခဲ့သည်နောက်တွင်SelçukŞahinဖြစ်သည်။
SelçukŞahinသည် Emre Belözoğluနှင့်အတူလုပ်ကိုင်လိုသောနာမည်တွင်ပါသည်။ Fenerbahçeအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သောSelçukŞahinသည်သူ၏မစ်ရှင်တွင်လျှို့ဝှက်သူရဲကောင်းတစ် ဦး အဖြစ်မှတ်မိနိုင်ခဲ့သည်။
Fenerbahçeအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောSelçukŞahinသည် ၂၀၀၃-၂၀၁၅ အကြားတွင်ဘောလုံးကစားခဲ့သည်။ သူက 338 ဂိမ်းထဲမှာကစားခဲ့ပါတယ်။ (၃) TFF Super Cup၊ (၂) တူရကီဖလား (၂) ခု၊ လိဂ်ဖလား (၅) ခု၊ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ် (၂၀၀၈) နှင့် (၂၀၁၃) တွင်ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
SULTANBET542 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN SULTANBET561 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN SUPERBAHİS630 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN BETBOO868 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN BETBOO868 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN RESTBET501 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN SUPERTOTOBET0121 EMRE BELÖZOĞLU’NDAN KORONAVİRÜS İTİRAFI RESTBET501 BEŞİKTAŞ JOSEF DE SOUZA’YI AÇIKLADI SULTANBET577 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ SULTANBET577 GALATASARAY’DA ONYEKURU İÇİN GERİ SAYIM!
15 Comments on SULTANBET577 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN
AHMET December 6, 2020 at 7:20 am
FATMA December 8, 2020 at 11:00 pm
BENGÜHAN December 9, 2020 at 12:20 am
restbet casino spoyler vereyim aşık olacağınız ödemesi sağlam bir site.
BERK December 10, 2020 at 11:10 am
ALİ SAİP December 10, 2020 at 11:40 am
IŞIL December 11, 2020 at 4:50 pm
AYŞEGÜL December 13, 2020 at 3:20 am
restbet kayıt düzgn bence üye oldum bedava bonus kazandım
HİDAYET December 13, 2020 at 8:40 am
DİDEM December 13, 2020 at 9:00 pm
SÜERDEM December 15, 2020 at 12:10 am
TAYFUR December 16, 2020 at 2:20 am
HÜLYA GÖZDE December 17, 2020 at 12:20 pm
RASİM December 18, 2020 at 4:50 am
ALİ December 18, 2020 at 9:30 am
EBRU December 18, 2020 at 10:50 pm